ဤထုတ်ကုန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှအသစ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆေးရည်၊ ရေမွှေးစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အေးခဲပြီးနောက်အရည်ကိုသန့်စင်ရန်နှင့်စစ်ထုတ်ရန်။ ၎င်းသည် lotion နှင့်ရေမွှေးများကိုစစ်ထုတ်ရန်အလှကုန်စက်ရုံအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်၏ပစ္စည်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိ ၃၀၄ သို့မဟုတ် ၃၁၆ လီသံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးယူနိုက်တက်စတိတ်မှတင်သွင်းသောနယူအမြှေးပါးစုပ်စက်ကိုဖိအားစစ်ထုတ်မှုအတွက်ဖိအားအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ချိတ်ဆက်နေသောပိုက်လိုင်းသည်သန့်ရှင်းသောပွတ်တိုက်ပိုက်တပ်ဆင်ထားသည်။ အားလုံးတပ်ဆင်ရန်အမြန်တပ်ဆင်ထားသည့်ဆက်သွယ်မှုပုံစံကိုတပ်ဆင်သည်။ ၎င်းသည် polypropylene microporous filter အမြှေးပါးတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းကိုအလှကုန်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနဌာနများ၊ ဆေးရုံများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်အခြားယူနစ်များတွင်များသောအားဖြင့်အရည်အနည်းငယ်ကိုရှင်းလင်းပြီးပိုးသတ်ရန်အသုံးပြုသည်။
ဤကိရိယာများသည်အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံနှင့်ခြေရာအနည်းငယ်သာရှိသောအားသာချက်များရှိသည်။
ဒီစက်ကိုသာမန်ဖိအားနှင့်အပူချိန်နိမ့်အောက်ရှိအရည်များကိုရောနှောခြင်း၊ ၎င်းသည်အလှကုန်စက်ရုံများအတွက်နက္ခတ္တဗေဒ၊ ရေမွှေး၊ ရိုးရာရေနှင့်ပါးစပ်အစရှိသည့်အရာများအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ ဤအတောအတွင်း၎င်းကိုသုတေသနဌာနများ၊ ဆေးရုံများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ဘက်တီးရီးယားများဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အရည်အနည်းငယ်ကိုစစ်ထုတ်ခြင်းအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆိုပါပိုက်သည် GMP စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောလျင်မြန်သောတပ်ဆင်မှုဆက်သွယ်မှုပုံစံဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။
အလှကုန်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်း: အလှကုန်ပစ္စည်းရေ၊ ရေမွှေး၊ အနှစ်သာရ
ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်း: ပါးစပ်ဆေး, ပါးစပ်အရည်, ဆေးရည်အရည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပြုတ်ရည်
အစားအစာလုပ်ငန်း - အရက်၊ အဖျော်ယမကာစသည်
3. ပေါက်ကွဲမှု - အထောက်အထားရောစပ်စနစ်
၁။ ခဲနေသောစနစ်၏အနည်းဆုံးခဲသောအပူချိန်သည် -15 reach အထိရှိနိုင်သည်
2. အမျိုးမျိုးသော aqueous ဖြေရှင်းချက်၏ရှင်းလင်းခြင်း filtration နှင့်မြုံ filtration လျှောက်ထားခဲ့သည်
ဓာတ်ခွဲခန်းဖြေရှင်းချက်နှင့်ဘက်တီးရီးယားယဉ်ကျေးမှုမီဒီယာ၏ filtration သည် 3.
၄။ toner၊ ရေမွှေး၊ မျက်ခုံး၊ ဗီတာမင်၊
ရှေ့သို့ Tube အတွင်းပိုင်းအပူပေးစက်နှင့်တံဆိပ်ခတ်စက်
နောက်တစ်ခု: လေဟာနယ် Emulsifying Unguent စက်